Mayelana Nathi - Hengshui HaoFa Rubber&Plastic Products Co., Ltd.
I-Hengshui HaoFa Rubber & Plastic Products Co., LTDeyasungulwa ngo-2016, inkampani kanye nemboni zitholakala edolobheni laseHengshui, esifundazweni saseHebei, eChina.Singumkhiqizi ochwepheshe wepayipi likawoyela, izintambo zikaphethiloli, amapayipi nezinye izingxenye eziyisipele embonini yezimoto.Ngekhwalithi enhle nesevisi engcono kakhulu, i-"HaoFa" iwine uphawu lokuthengisa oludumile lwesiFundazwe sase-Hebei, kanye nasemakethe yasekhaya.
Singabakhiqizi abaqeqeshiwe bezesekeli zokuzenzela kanye nemikhiqizo yamapayipi, abaneminyaka engu-5 yesipiliyoni sokukhiqiza esichwepheshile.
Sinefekthri yethu, i-Advancedtechnology, ukunikezwa okuzinzile;Yiba nokuphathwa kwekhwalithi yobuchwepheshe kanye nethimba lokuhlola inqubo.
Ubuchwepheshe bethu obuthuthukisiwe buqinisekisa ucwaningo nokuthuthukiswa komkhiqizo, ikhono lokukhiqiza ngokuya ngezidingo zamakhasimende.Nikeza ngemikhiqizo yekhwalithi engcono kakhulu, enamanani avumayo kakhulu.
Inkampani ihlale ibeka ikhwalithi kuqala, ihambisana nomqondo "wokusungulwa kwabantu, okuqhubekayo okuqhubekayo, ukuphishekela ubuhle".Njengomkhiqizi oyiqiniso, oqondile nochwepheshe, i-HaoFa isithuthuke yaba ngomunye wabakhiqizi abakhulu nabathumeli kwamanye amazwe endaweni yezingxenye ezisele.Imikhiqizo yethu eyinhloko imboza ipayipi likaphethiloli, ipayipi likawoyela, izifakelo zepayipi njll. Imikhiqizo yethu iyahambisana nezimoto eziningi futhi isetshenziselwa kabanzi ukwenza amasistimu kaphethiloli, amasistimu amabhuleki, amasistimu enjini, amasistimu okupholisa, izingxenye zangaphakathi nezangaphandle.
Sinemboni e-Hebei futhi inokukhiqiza okuthuthukile, okokusebenza kokuhlola, uhlelo lokuphatha oluphelele kanye nesistimu yokuqinisekisa ikhwalithi.Sisekela izinsizakalo ze-OEM ne-ODM, futhi siphumelele izitifiketi ze-SGS, CE, ISO.Njengamanje, imikhiqizo yethu yamukelwa kabanzi ngamazwe amaningi emhlabeni okuhlanganisa: iBrithani, i-United States, i-Australia, iJalimane, iJapane, iRussia, iTurkey, iBrazil neMalaysia njll. Samukela ngokufudumele amakhasimende ukuvakashela imboni yethu, futhi sinikeze isevisi enhle kakhulu yekhasimende ngalinye.